गीताको अध्यात्म विज्ञान :शाश्वत सुखको प्राप्ति कसरी ? कर्म के हो? - GalaxyPati
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार २२:१०
वीरगंज १० ,जेठ : सयौं वर्ष अघि लेखिएको श्रीमद्भागवत् गीतामाथि अनेक किसिमका विद्वानहरूले विश्लेषण र शोध गरिसकेका छन् । यसमा कसैले यसलाई अद्भूत ज्ञानको सागर मानेका छन् त कसैले यसलाई फगत एउटा कथा संग्रह पनि मान्ने गर्छन् । तर संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद गरिएको ग्रन्थको सूचीमा समेत समावेश भएको यो ग्रन्थको सहि अर्थ खुट्याउन कमै मान्छे मात्रै सक्षम छन् । जसरी हामी प्रायः हाम्रो दैनिक जीवनमा गलत धारणाको शिकार हुन्छौं जसको कारण सञ्चार दुरी र हामी वास्तविक अर्थबाट वञ्चित हुनु नै हो । गीताको ज्ञानको बुझाइमा पनि यही अभाव खड्किएको देखिन्छ ।